किन यो ज्ञान संग सर्वनाम सही छ, जबकि बनाउन को परिचय संग कुनै (नाम को व्यक्ति) भारी छ? भारी अर्थ यो विरलै भनेर भन्न? जब यो छ भने, यो भारी छ, यो मतलब छ कि छैन गलत, तर निर्माण आवाज गर्न खराब कान को, र छन् अधिक सरल तरिका भन्न । म छाप संग पहिलो कार्य आपसी छ (दुवै राम्रो हो छ एक विषय), जो बराबर हुनेछ थाह (एक अर्को)
होइन भनेर पावलले थिएन, यस अवसरमा, यो ज्ञान को पत्थर । यो भने मात्र कि पत्रुस भेट पावलले लागि पहिलो पटक हो । यो सम्भव छ कि पत्रुस वा पावलले थाह अन्य दृष्टिकोण, वा अफवाह, तर केही छ कि भन्छन् । हो, यो साँचो हो, कडाई बोल्ने मात्र कुरा हामी भन्न सक्छौं कि पत्थर थाह छ, तर पावलले, एक थाहा छैन, उहाँलाई लागि केही छ भने । राम्रो आह? तर, म के बुझेका देखि तपाईं के भने म लाग्यो त्यहाँ थियो एक फरक बीच पत्रुस र पावलले भेट र पत्रुस थियो संग पावलले (वा पत्रुस, गरे को जानकारी को पावलले), कुनै? पहिलो मा यो पनि छ कि तर्क पावलले थाह थियो (पत्थर) विपरीत, दोस्रो जहाँ यो ज्ञात छैन, पावलले भने छ वा छैन को ज्ञान
यदि पत्रुस बनाउँछ जानकारी पावलले, जरूरी पावलले पनि यस ज्ञान को पत्थर, कुनै? किनभने दुवै तिनीहरूले छैन ज्ञान, परिभाषा द्वारा, तिनीहरूले के थाहा छैन — व्यक्तिगत, कुनै पनि मामला मा: तिनीहरूले सुनेका हुन सक्छ अर्को, तर आफ्नो ज्ञान बिना. म कल्पना गर्न सक्दैन जहाँ एक अवस्था एक हुनेछ ज्ञान को अन्य, जो पहिले नै थाहा थियो, व्यक्तिगत छ । म सोच थियो भने यो वाक्य, पत्रुस थियो संग पावलले कार्य थियो आपसी (हुनत मात्र पत्थर हुन बारे मा), यदि हो, त्यसपछि यो हुनेछ बराबर पत्रुस र पावलले गरे प्रत्येक अन्य गरेको जानकारी (अन्य), कुनै? यो गलतफहमी हुन सक्छ, एक फरक को खेत मा आवेदन को वाक्यांश मौखिक सूचना । अन्य शब्दमा, तपाईं उहाँलाई दिन सायद एक फराकिलो अर्थमा ।: भने एक मित्र बुझाउँछ एक मानिस द्वारा दूर तपाईं बताउन: यो मेरो बुबा छ, तर भइरहेको उहाँलाई क्रोधित उहाँले इन्कार उहाँसित कुरा गर्न र, त्यसैले, तपाईं वर्तमान मा, अन्य एक हुनेछ, तपाईं भन्न साँझ बताएर यो कथा को दृश्य: बुबा मेरो मित्र
पत्ता भिडियो क्यामेरा →